Yakakura Hadron Collider, inofambiswa neGNU / Linux | Kubva kuLinux
Yakakura Hadron Collider, inofambiswa neGNU / Linux
Nezuro, masayendisiti kubva kuEuropean Organisation yeNuclear Physics (CERN, nechidimbu chayo muChirungu) ivo vakaroverana matanda maviri emapurotoni mune iyo particle accelerator yakaiswa muGeneva, ndichivimba kuwana mhinduro kune akawanda asingazivikanwe muchadenga. Iyi, yakakosha fizikisi chirongwa chenguva pfupi yadarika, iyo Large Hadron Collider (LHC, Yakakura Hadron Collider), yakadhura mabhiriyoni gumi emadhora uye kupfuura makore makumi maviri aakatora kuivaka uye mupiro weinenge hafu yeanogadzira nyika, yaida chimwe chinongedzo kuti chishande: GNU / Linux.
CERN, iro rinotungamira chirongwa cheLHC, iri kushandisa chimwe chinhu chinozivikanwa se Sayenzi Linux, iyo inomhanya pamakomputa pamambure anoita simba rinosvika zviuru zana zvezviuru zveCPU uye nezve gumi nemashanu petabyte yedata pagore.
CERN pachayo ine ruzivo rwakati wandei neGNU / Linux, uye inopa rutsigiro rwakasimba rweSainzi Linux kugovera, iri vhezheni yakadzoserwa ye Red Hat Enterprise Linux, yakafanana ne CentOS.
Tichifunga kuti simba reLHC rakakwana kuparadza Nyika, kugadzira gomba dema muchadenga, zvinonyaradza kuziva kuti zvimwe zvezvimedu zvaro zviri kure nenjodzi yekuona bhuruu rerufu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Yakakura Hadron Collider, inofambiswa neGNU / Linux
Joel alanis akadaro
Kune vadzidzisi, ndinoda kuti mundivhenekere zvishoma nezvenyaya yeiyo HADRONES yakakwenenzverwa, kana gomba dema riri musanganiswa wehukuru mune imwe nzvimbo (ipo pasina nzvimbo kana inogara iripo), mibvunzo yangu ndeiyi:
1.- Hombe nhema ichave yakakura sei panguva iyoyo?
2.- Zvinotora nguva yakareba sei kushandura izvi?
3.- ichawedzera saizi yayo kana basa rayo muchadenga rinogara riri?
4.- Richagadzira simba rakawanda sei kana subparticles ikasangana?
5: _ Tiri kutaura nezve fission yenyukireya nekumhanyisa, uye kuti pavanosvika pakumhanya kwavo vanogona kukonzera njodzi yepasatomiki iyo inogona kuunza mamiriro ekunze?
6.- Kana simba rikawanikwa kubva mukurovera uku, tingave tichikanganisa oxygen yatinofema here?
Pindura kuna Joel Alanis
Vakawanepi kuti "simba" reLC rinokwana kuparadza nyika ?????
Wow! Hapana zano ... yakanaka mibvunzo. Chero rubatsiro paWikipedia?
Edward Levi akadaro
Buri dema raizogadzirwa raizove nehukuru hwakaenzana (uye nekudaro kukwezva kwakafanana) kwezvimisikidzo zvakaigadzira. Ndokunge, chimwe chinhu chidiki, chidiki zvekuti zvingave zvisingaite kuona. Iyo hadron collider inoshanda pasimba rakakwira zvakanyanya kupfuura makwikwi e neutron mune yenyukireya, uye haishandise fissile element, saka bhomba-dhizaina yenyukireya cheni yekuita haigone. Pfungwa yeLHC haisi yekuwana simba, ndeyokuyera nekucherechedza kuti masatomic zvikamu zvinogoveranwa sei mukuwanda kwesimba kwakafanana neyaBig Bang.
Pindura Eduardo Lev
Iyi nhau haisi chinhu chitsva asi pane chimwe chinhu chandanga ndisingazive saka ndiri kuzokuudza kuti zvinofungidzirwa kuti mubiridzi akapinda uye akapotsa atora muchina asi nerombo rakanaka kuti hazvina kuitika ipapo, hapana kupfuura wave! zvakare ndanga ndisingazive kuti muchirongwa ichocho vaishandisa Linux asi hei ... Tariro uye Linux yakachengeteka kwazvo zvekuti hapana chinoitika!
Ofelia Perez akadaro
mazhinji esoftware yangu ndeyamahara, uye nekutenda kune Microsoft "isinganetsi tsika" (isingaregi kuvhima), ini ndiri kupfuura anorwara navo, ndiri kuenda kune linux.
Pindura kuna Ofelia Pérez
Yemukati dhizaini ine Yakanaka Imba 3D